Noqo Cunto fudud oo Toomaatig ah oo ugu Fiican Soo saaraha iyo Warshadda |Xingyong
feature ugu weyn
1. Si toos ah u dhammaystir dhammaan habka quudinta, cabbirka, buuxinta iyo samaynta bacaha, daabacaadda taariikhda, gudbinta iyo bixinta.
2. Kala duwanaansho codsi oo ballaadhan iyo laqabsiga walxaha xooggan.
3. Saxnaanta cabbirka sare iyo hufnaanta sare.
4.Waxay ku habboon tahay macaamiisha u baahan dhaqaale iyo wax ku ool ah, qalab kala duwan, oo aan lahayn shuruudo gaar ah oo loogu talagalay baakadaha.
Hore: Habka baakadaha iyo miisaanka cuntada granular
Xiga: Atomaatig ah oo shaqo badan Rotari ah oo hore loo sameeyay Buuxinta caanaha kafeega burka xawaashyada budada mishiinka Advanced Pumpkin Packing Flour Machine
Mashiinka Baakadaha Cuntada fudud
© Xuquuqda daabacaadda - 2010-2021: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin. Alaabta sifaysan, Khariidadda goobta, Qaadista suunka tubbada, Gaadhida Skirt Skirt, Gaadhida suunka, Suunka Gudiyaha Korontada, Baakadaha suunka wareejinta, Gaadhida birta aan lahayn birta ah, Dhammaan Alaabta